जोगीको आवरणमा भेटिए फरार बैंकर ज्ञवाली - Naya Patrika
काठमाडौं | असोज २०, २०७५
महानगरीय अपराध महाशाखाकाे टोलीद्वारा भारतको वृन्दावनको आश्रमबाट पक्राउ
एक समयका सेलेब्रिटी बैंकर थिए कमल ज्ञवाली । ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंक किस्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) रहेका उनी टप बैंकरमा गनिन्थे । सामान्य शिक्षकबाट केही वर्षमै वाणिज्य बैंकको सिइओ बनेका उनको सफलता अस्वाभाविक लाग्ने खालको थियो । तर, सफलता लामो समय टिक्न सकेन । बैंकमा भएको किर्ते कामको अनुसन्धान सुरु भएलगत्तै ५ वर्षअघि उनी फरार भए । उनको संलग्नतामा बैंकमा करोडौँ घोटाला भएको खुल्दै गयो ।
प्रहरीलाई झुक्याउन ज्ञवालीले जोगीको भेष धारण गरेका थिए । ‘त्यहाँ पूरै जोगीका रूपमा उनको पहिचान थियो,’ पक्राउ गर्न गएका अपराध महाशाखाका एक अधिकारीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘प्रहरीलाई छक्याउन नै उनले यस्तो हुलिया बनाएको हुनुपर्छ ।’ उनी अन्य जोगीहरूसँगै बसिरहेका थिए । लामो टुप्पी पालेका उनलाई ठम्याउन सुरुमा त प्रहरीलाई गाह्रो भयो । तर, सम्पूर्ण सूचना लिएर भारतीय प्रहरीसँगको समन्वयमा त्यहाँ पुगेको महानगरीय अपराध महाशाखाको टोलीले उनलाई पक्राउ गरी छाड्यो । शुक्रबार नेपाल ल्याएपछि प्रहरीले अदालतमा पेस ग-यो । अदालतको आदेशपछि उनलाई कैद भुक्तान गर्न जेल चलान गरियो ।
ज्ञवालीलाई अदालतले तीनवटा मुद्दामा दोषी ठहर गरिसकेको छ । तीनैवटा मुद्दामा तत्कालीन किस्ट बैंकसँग सम्बन्धित छन् । बैंकिङ कसुर मुद्दामा ४ करोड २६ लाख ८३ हजार ५ सय ११ रुपैयाँ जरिवाना र ४ वर्ष कैदको सजाय भएको छ । १३ जेठ ०७३ मा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले सो फैसला गरेको थियो ।
त्यस्तै, किर्ते जालसाझी मुद्दामा २९ लाख ७७ हजार तीन सय ५६ रुपैयाँ जरिवाना भएको छ । ताराकुमार भट्टचलने दायर गरेको लेनदेन मुद्दामा उनलाई १ करोड ५५ लाख जरिवाना र २ वर्ष कैद सजाय भएको छ । सो मुद्दामा म्याद तामेल भइनसकेकाले उनलाई पुनरावेदन गर्ने ठाउँ भने छ ।
कमल सिटौलाको नाममा तत्कालीन सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकमा ६३ हजार ३ सय ४८ कित्ता सेयर रहेको सकर्ते कागजपत्रका आधारमा ५ करोडभन्दा धेरै कर्जा दिएका थिए । कर्जा नतिरेपछि सेयर लिलाम गर्दा त्यति सेयर नै नभएको खुल्यो । घटना राष्ट्र बैंकमा पुग्यो भने उसले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)लाई पत्राचार ग-यो ।
थप अनुसन्धानको क्रममा ज्ञवालीले अनियमित रूपमा जम्को प्रकाशनलाई पनि करोडौँ कर्जा दिएको खुल्यो । जुन कम्पनी किशोर ढकाल र श्रीमती गौरीको नाममा थियो । सिआइबीले श्रीमतीलाई पक्राउ गरेपछि ज्ञवाली फरार भएका थिए । फरार रहेकै वेलामा उनले किस्ट बैंकमा रहेको आफ्नो सेयर बिक्री गरे । किस्ट बैंकलाई प्रभु बैंकले खरिद गरिसकेको छ ।
अरूको नाममा करोडौँ सम्पत्ति
फरार भएपछि अन्य व्यक्तिको नाममा करोडौँ सम्पत्ति राखेको खुलेको छ । स्रोतका अनुसार काठमाडौंको एक मेडिकल कलेजमा उनको करिब ५० प्रतिशत सेयर पाइएको छ । ललितपुरमा २ वटा अपार्टमेन्ट र एउटा घर छ । गुल्मीमा पुख्र्याैली सम्पत्तिका साथै अन्य जिल्लामा पनि उनले जग्गा किनेर अरूको नाममा राखेको स्रोत बताउँछ ।
ज्ञवाली ०५२ सालमा उच्च शिक्षाका लागि गुल्मीबाट काठमाडौं आएका थिए । पढाइसँगै उनले सुरुमा शिक्षकको काम गरे । उनी महत्वाकांक्षी थिए । कमर्स पढेका उनी फाइनान्स कम्पनी स्थापना खोल्ने योजनामा लागे । काठमाडौं आएको सात वर्षमै किस्ट मर्चेन्ट फाइनान्स एन्ड कम्पनी स्थापना गरे । उनकै नेतृत्वमा सो फाइनान्स स्थापना भएको थियो ।
त्यसवेला काठमाडौंमा घरजग्गा कारोबार फस्टाएको थियो । घरजग्गामा लगानी गर्न कुनै लगाम थिएन । फाइनान्सको पैसा आफैँले समेत दुरुपयोग गरी घरजग्गामा लगानी गरे । त्यसरी उनी फाइनान्स सुरु गरेको केही वर्षमै करोडपति बनेका थिए । त्यही कारण फाइनान्स सुरु गरेको सात वर्षमै त्यसलाई उनले ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंक बनाएका थिए । वाणिज्य बैंक मात्र होइन, सबैभन्दा धेरै शाखा भएको वाणिज्य बैंकसमेत बनाएका थिए । देशका ठूला र सफल बैंकरका रूपमा उनको प्रशंसा भइरहेको थियो ।
खतिवडा आएपछि ज्ञवालीको दुर्दशा
जब राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा डा. युवराज खतिवडा (हालका अर्थमन्त्री) नियुक्त भए, उनको दुर्दशा सुरु भयो । खतिवडाले बैंकलाई घरजग्गा लगानीमा नियन्त्रण सुरु गरे । त्यसबाट सबैभन्दा धेरै प्रभावित किस्ट नै बन्यो । ज्ञवालीले नक्कली धितोका आधारमा समेत बैंकबाट पैसा निकालेर घरजग्गामा लगानी गरेका थिए ।
राष्ट्र बैंकले नियन्त्रण सुरु गरेसँगै उनका लगानी संकटमा परे । बैंकबाट लिएको पैसाको हिसाब मिलाउन सकेनन् । त्यसका लागि सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकबाट समेत अनियमित तरिकाले कर्जा लिएका थिए । त्यो पनि तिर्न नसकेपछि उनको ओरालो यात्रा सुरु भयो । समस्या बढेपछि राष्ट्र बैंकले अनुसन्धान थाल्यो ।
राजनीतिक रूपमा उनको सबै पार्टीमा पहुँच थियो । त्यसकारण राष्ट्र बैंकमा पनि मिलाउने उनको योजना थियो । तर, डा. खतिवडासँग उनको टक्कर प-यो । कुरा नमिलेपछि उनी राष्ट्र बैंकबाट खतिवडालाई नै हटाउने अभियानमा समेत लागेको एक बैंकर सुनाउँछन् । तर, सफल भएनन्, आफैँ फरार हुनुप-यो । फरार भएको पाँच वर्षपछि उनी कारागार पुगेका छन् ।
#जोगीको आवरण #बैंकर ज्ञवाली